Digniinaha Socdaalka Mareykanka, laakiin weli way ka fiican tahay Bahamas
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Digniinaha Socdaalka Mareykanka, laakiin weli way ka fiican tahay Bahamas
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • saaciday inay • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan • Wtn
Liiska waddammada uu Mareykanku ku darayo “liistada socdaalka” ayaa sii kordhaya. Tan iyo shalay waxaa sidoo kale ku jira Bahamas.
Wali way ka fiican tahay oo ka ammaan badan tahay Bahamas marka la barbar dhigo u safridda Dawlado badan oo Maraykanka ah sida Florida ama Louisiana.
Maaddaama liisaska noocaas ah ee gudaha ah aysan ku jirin liiska, isbarbar -dhigga gudahana uusan ka mid ahayn digniinta socdaalka caalamiga ah, meelaha dalxiiska ku tiirsan ee dalxiiska sida Bahamas ayaa hadda laga saaray nidaamka Mareykanka.
Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Mareykanka (CDC) ayaa soo saaray digniin socdaal oo Heerka 4 ah oo loogu talagalay dadka fasaxa u jooga Mareykanka ee qorsheynaya inay booqdaan Bahamas.
Tani waxay saamayn ku yeelan kartaa martidayaasha Disney Cruise Line kuwaas oo qorsheynaya inay ku booqdaan jasiiradda jasiiradda markabka doonta ee Disney mustaqbalka dhow.
In kasta oo caabuqyadu ay ugu sarreeyaan Mareykanka, haddana waxay ku sii yaraanayaan Bahamas, iyagoo su’aal gelinaya digniinta Heerka 4 ee uu Mareykanku ka soo horjeedo Bahamas
CDC waxay maanta ku dartay 6 waddan liiskeeda digniinta safarka Heerka 4aad.
Lixda dal ee lagu daray Liiska Socdaalka Mareykanka ma aha:
Runtii ma ka fiican tahay booqashada Bahamas?
Waxay ku fiican tahay Bahamas. Kani wuxuu ahaa hal -ku -dhegga dalkan lagu yaqaan xeebaha ciidda cad ee quruxda badan, biyaha buluugga ah, iyo cirka buluugga ah. Maraakiibta dalxiiskas sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah faylalka dalxiiska ee dalkan Caribbean -ka.
Dhab ahaantii wali way ka fiican tahay Bahamas!
… Laakiin dawladda Maraykanku waxay maanta ka tagtay qayb intee le'eg ayay ka tahay in la booqdo Bahamas marka la barbar dhigo Florida ama Hawaii. Taa bedelkeeda, Dowladda Mareykanka waxay soo saartay digniin ah in aadan ku safrin Heerka 4 digniin ka dhan ah deriskeeda oo kaliya 100 mayl u jirta xeebta Florida.
Dhaqaalaha Bahamas wuxuu ku xiran yahay safarka iyo dalxiiska. Mareykanka oo soo saaray Level 4 digniinta safarka waa niyad jab weyn iyo hanjabaad ku wajahan qaranka jasiiradda iyo 368,000 oo qof oo Bahama ah. Qaar badan oo ka mid ah ayaa shaqeeya waxayna ku tiirsan yihiin samaqabka warshadaha safarka iyo dalxiiska, dadka Mareykankana waa kuwa ugu badan ee soo booqda.
Digniinta safarka Mareykanka ee ka dhanka ah Bahamas ayaa ah:
Ha u safrin Bahamas sababtoo ah Covid-19. Ka taxaddar meelaha qaarkood ee Bahamas sababta oo ah dembiyada. Akhri La -talinta Socdaalka oo dhan.
Akhri Wasaaradda Arrimaha Dibedda Bogga COVID-19 ka hor intaadan qorsheyn safar kasta oo caalami ah.
Mareykanka Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) soo saaray a Ogeysiiska Caafimaadka Heerka 4 ee Bahamas sababtuna tahay COVID-19, taasoo muujineysa heer aad u sarreeya oo COVID-19 ee dalka. Khatartaada inaad ku qaaddo COVID-19 iyo inaad yeelato calaamado daran ayaa laga yaabaa inay hooseeyaan haddii si buuxda loogu tallaalo Tallaalka la oggolaaday ee FDA. Kahor intaadan qorsheyn safar kasta oo caalami ah, fadlan dib u eeg talooyinka gaarka ah ee CDC ee la tallaalay iyo aan la tallaalin socotada. Booqo Safaaradda Bogga COVID-19 si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan COVID-19 gudaha Bahamas.
Dhaqaalaha Bahamas wuxuu ku tiirsan yahay dalxiiska, touri Ameerikasts
Waxaa la yaab leh in Mareykanku uu jebinayo dhammaan diiwaannada adduunka oo leh caabuqyo cusub iyo dhimasho, halka tirooyinka Bahamas ay ku jiraan hoos u dhac. Lambarada caabuqa iyo tirakoobka dhimashada ee Bahamas waxay ka hooseeyeen tirooyinka Gobolka Florida ama Hawaii markii la arkay iyadoo loo eegayo tirada dadka.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya USA weyn iyo Bahamas yar waa tallaal.
Inkastoo 33% dadka Mareykanka ayaa sheegaya inaysan waligood qaadan doonin tallaal, inta badanna waa la tallaaley, halka tallaalka si fudud looga heli karo Mareykanka, Bahamas -ka yar ma helin tallaal ku filan oo uu ku maamulo dadkiisa oo dhan. Kaliya 15.3% dadweynaha ayaa la tallaalaa.
Soo dhaweynta booqdayaasha la tallaalay ayaa muhiim u ah caafimaadka Bahamas safarka iyo warshadaha dalxiiska
Bahamas waxay soo sheegtey 103 caabuq 100,000 oo qofba 7dii maalmood ee la soo dhaafay.
Tirooyinka noocan oo kale ah waxay matalaan 37% halka ugu sarreysa, halka Mareykanka uu soo sheego 59% infekshannada ugu sarreeya.
Waa wax la fahmi karo in Waaxda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka loo xilsaaray inay dadka Maraykanka uga digto khataraha dibadda. Si kastaba ha noqotee, haddii lagu saleeyo tirooyinka joogitaanka Bahamas ee qof Mareykan ah oo la tallaalay ayaa iska cad inay ka badbaado badan tahay joogitaanka guriga xaaladaha badankood, maxay Waaxda Arrimaha Dibaddu u dooneysaa inaysan ku darin xaqiiqadan la -taliyayaasha safarka dibadda?
Lack isuduwidda caalamiga ah ee dalxiiska
Waa tusaale kale oo meesha ka maqan hoggaanka caalamiga ah ee dalxiiska, ama hoggaanka adduunku uusan lahayn wakiil dalxiis.
Juergen Steinmetz, gudoomiyaha Dalxiiska Adduunka Network ayaa leh: "Isuduwidda iyo hoggaaminta la'aanta socdaalka iyo warshadaha dalxiiska adduunka ayaa ah halista ugu weyn ee dhaqaalaha iyo caafimaadka."
Bahamas waa meel ammaan ah oo nadiif ah oo loogu talagalay dhammaan inay ku raaxaystaan.
TGuddiga Dalxiiska ee Bahamas ayaa cusboonaysiiyay boggiisa caafimaadka safarka
Caafimaadka iyo samaqabka dhammaan kuwa soo gala ama deggan Bahamas ayaa ah mudnaanta koowaad, waxaana la fuliyaa dadaallo taxaddar leh si loo yareeyo faafitaanka COVID-19. Xeerarka socdaalka iyo soo gelitaanka ee soo socda ayaa loo dejiyay si loo hubiyo in Bahamas ay tahay meel ammaan ah oo nadiif ah oo loogu talagalay dhammaan inay ku raaxaystaan.